News Karkhana - The Largest Private News Agency Of Nepal
Thu, 07 Jul 2022 02:14 am
अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले सम्हाले
भकारो सुधार कार्यक्रमले ग्रामीण भेगका किसानको उत्पादन बढ्यो
न्युज कारखाना काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो दिन २४ जेठ मध्यराति अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमाथि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आफूले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । छानबिन समितिलाई काम गर्न सहजता प्रदान गर्न राजीनामा दिएको जानकारी दिँदै उनले छानबिन समिति गठनको स्वागत गर्दै समितिकाे प्रतिवेदन स्वीकार्य रहने पनि बताए । एमालेसहितका सांसदले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएको भन्दै बुधबारकै प्रतिनिधिसभाको बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको थियो ।
रमेश सुवेदी/ न्युज कारखाना काठमाडौं, २२ असार अघिल्ला तीन संस्करण यु–१८ र यु–१९ संरचनामा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसीप यस संस्करण भने यु–२० को हुने भएकाे छ । एकेडेमीबाट उत्पादित खेलाडीहरूको उमेर हद नाघ्दा र एकेडेमीका खेलाडी पर्याप्त नहुँदा अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)ले खुला छनोटका लागि सूचना सार्वजनिक गरेकाे थियाे । एन्फाकाे सूचनासँगै ७७ जिल्लाका करिब सात सय खेलाडी एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजना भएको खुला छनोटमा सहभागी भए । सात सयभित्रै थिए, सुगम सुवाल । सुगम एन्फाले सूचना सार्वजनिक गरेसँगै युरोपेली मुलुक डेनमार्कबाट नेपालका आएका थिए । पाँच वर्षदेखि आमा बुबासँग डेनमार्कमा बिताइरहेका सुगम युवा टोलीमा स्थान बनाउने सपना साकार पार्न यतिबेला सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदानमा आफूलाई निखारी रहेका छन् । मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले छनोटमा सहभागी करिब सात सयबाट ३० सदस्यीय टिम बनाएका छन् । यो टिमले नै आगामी साफ च्याम्पियनसीप र एएफसी यु–२० एसियन कप छनोटमा नेपालको यात्रा, योजना र लक्ष्य बनाउनेछ । केसीले तयार पारेको ३० सदस्यीय टोलीमा सुगम पनि समेटिएका छन् । डेनमार्कको तेस्रो श्रेणीको ‘भीएसके ओरुस’ एकेडेमीमा अनुबन्ध सुगमको लक्ष्य अन्तिम २३ भित्र रहेको छ । ‘देशको प्रतिनिधित्व गरेर खेल्ने ठूलो योजना छ । यहि सपना साकार पार्न डेनमार्कबाट नेपाल आए ।’ बुधबार बिहान एन्फा मैदानमा अभ्याससत्र पछि सुगमले न्युज कारखानासँग भने । ‘एन्फा साइटमा हेरेको थिए । बाबा ममीलाई यस्तो छ भनेर भने । उहाँहरूको पनि सपना होला, राष्ट्रिय टिममा देख्ने ।’ सुगमको जन्म काभ्रे जिल्लाको धुलिखेलमा भएको हो । १४ वर्षको उमेरमा सुगम आमा (सकुन)सँग डेनमार्क गएका थिए । त्यसअघि नै बुबा श्याम क्यानडामा थिए । बुबा क्यानडाको स्थायी बसाेबास प्राप्त नागरिक भएसँगै सुगमले पनि मातृभूमि छाड्ने योजना बनाए । त्यसयता, सुगम दोस्रो पटक नेपाल फर्किएका हुन् । गत दसैंमा पनि उनी नेपाल झरेका थिए । ‘बुबा फ्रान्समा ‘पिएचडी’ सक्काएर अमेरिका जानुभयो । त्यसपछि सन् २०१७ मा क्यानडा गएपछि म र ममी पनि क्यानडा नै गयाैं । क्यानडामा दुई महिना बसेपछि हामीसँगै डेनमार्क गयाै‌ं ।’ १९ वर्षीय सुगम भन्छन् । सुगमले क्यानडा पुगेपछि एक एकेडेमीमा २–४ महिना खेले । जहाँ सुगमले एकेडेमीको यु–१५ र १६ टिमबाट खेलेका थिए । यसपछि बुबासँगै डेनमार्क पुगेपछि सुगमले क्यानडाको ‘ओरुस क्लब’मा ट्रायल दिए । ‘डेनमार्क पुगेपछि स्कुलबाट खेले । स्कुलका कोचले क्लबमा पुर्याउनु भयो । यु-१७ र यु-१९ खेल्न पाए । सिटी परिवर्तन भएपछि ‘भिएसके ओरुस’ मा ट्रायल दिए । कोरोनाले गर्दा यु-१७ खेल्न पाइन । यु-१९ दुई वर्ष खेले । अब, नेपालमा खेलेर फर्केपछि क्लबको सिनियर टिमबाट खेल्छु,’ सुगम भन्छन् । सुगम लेफ्ट र राईट विंगसँगै आवश्यकता अनुसार फरवार्ड पनि खेल्न सक्छन् । हाल यु-२० को अभ्यासमा भने सुगम लेफ्ट विंगमा अभ्यस्त बनाउँदै छन् । जहाँ उनले प्रशिक्षकको निर्णयमा न्याय गरेका पनि छन् । त्यसो भए के सुगम युवा टिममा पर्छन् त ? ‘खोई हेर्नुपर्छ ।’ हाँस्दै सुगम भन्छन् । राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका आयुष घलान र सुगमको पोसिजन समेत एउटै छ । यता, राइटमा समेत ए डिभिजन लिगमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका कृतिसरत्न छुन्जु छन् । त्यसैले पनि सुगमलाई अब ठूलै चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । ‘मेरो पोजिसनमा म र मनज्ञ (नकर्मी) छौं । अब, आयुषलाई पनि लेफ्टमै खेलाए गाह्रो पर्छ ।’ हाँस्दै सुगम भन्छन् । ‘तर राइटको लागि पनि म तयार छु । तर, त्यसमा पनि कृतिसरत्न छ ।’ नेपाली टिमका प्रशिक्षक मेघराज केसी सुगममा केही खुबी भएकै कारण यो स्थान (छनोट ३० भित्र) सम्म आईपुगेको बताउँछन् । ‘अहिले नै मैले २३ छनोट गरेको छैन । यहि ३० ले नै साफ र एएफसी खेल्ने हो । यहाँ हरेक दिन खेलाडी छनोट भइरहेको छ । यहाँ रहँदैमा टिममा परिन्छ भन्ने छैन । उ (सुगम) पक्कै यहाँसम्म आइपुगेको छ । केही खुबी भएर नै आएको हो ।’ ए डिभिजन क्लब सातदोबाटो युथ क्लबका प्रशिक्षक समेत रहेका केसीले भने । उता, बुबा श्यामले छोरो ३० भित्र छनोट भएपछि बधाई दिँदै गर्वको विषय भएको सामाजिक संजालमा ‘पोष्ट’ गरेका छन् । ‘बधाई छ, सुगम । तिम्रो राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने सपना नजिक छ । मेहनत जारी राख । हामीलाई गौरव छ ।’ हाललाई भने सुगम आफ्नो लक्ष्य यु-२० नै रहेको र यसमा डेब्यु भएमात्रै राष्ट्रिय टिमलाई लक्ष्य बनाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको लक्ष्य भनेको यही टिममा पर्ने हो । यु-२० मा डेब्यु पाउनु पर्याे । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय टिमको लक्ष्य बनाउनेछु । लक्ष्य भनेकै राष्ट्रिय टिम हो ।’
अखिल क्रान्तिकारीको समानान्तर समिति १ सय ९७ सदस्सीय (सुचीसहित)
न्युज कारखाना काठमाडौं, २१ असार प्रज्ञा भवनमा नेकपा माओवादीको केन्द्रिय समितिको पुर्ण बैठक चलिरहदाँ सोही पार्टीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष पवन कार्की समुहले भने समानान्तर समितिलाई पुर्णता दिएको छ । अध्यक्ष पञ्चा सिंहले संगठनमा बिद्यान बिपरित पदाधिकारी चयन देखी केन्द्रिय समितिमा सदस्य थप गरेको भन्दै लामो समय देखी असन्तुुष्ट कार्की समुहले अखिल क्रान्तिकारी बिशेष राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति गठन गरेर समानान्तर गतिबिधिमार्फत पुर्णता दिएको हो । सो समुहले १ सय ९७ सदस्य केन्द्रिय आयोजक समिति गठन गर्दै प्रदेश १ मा भरत घिमिरे, मधेस प्रदेशमा शिवराज धमला, बाग्मती प्रदेशमा सुरजसिंह ठकुरी, गण्डकी प्रदेशमा विकास भट्टराई, लुम्विनी प्रदेशमा बिनोद बराल, कर्णाली प्रदेशमा पदम नेपाली, सुदुरपश्चिममा सिके भट्ट र बिशेष प्रदेशमा सञ्जिव कार्कीलाई इन्चार्ज- संयोजक तोकेको छ । सो समुहका उपदेश यादवका अनुसार झन्डै २ दर्जन केन्द्रिय बिभागमा पनि इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज तोकिएका छन । आगामी बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तय गर्ने यादवले जानकारी दिएका छन ।
असार भित्र जिल्ला न्यायधिस नियुक्त नगरे चरणबद्ध आन्दोलनः ट्रेड युनियन
न्युज कारखाना काठमाडौं, १४ असार नेकपा राष्ट्रिय एकता पार्टी अध्यक्ष वामदेव गौतमले सर्वाेच्च अदालतले कम्युनिष्ट पार्टीलाई शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पु¥याएको बताएका छन् । आफू नेतृत्वको नयाँ राजनीतिक दल ‘नेकपा राष्ट्रिय एकता पार्टी’ घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष गौतमले साविक नेकपा खारेज, एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वाेच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र हानिकारक साविक भएको बताए । सो आदेशले कम्युनिष्ट पार्टीलाई शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पु¥याएको गौतमले बताए । नयाँ पार्टी घोषणा कार्यक्रममा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनर्स्थापित नेकपा (एमाले) पुनः विभाजन उन्मुख भयो र केही महिना पछि साँच्चिकै विभाजित भएरै छोड्यो । जुन तपार्इंहरुलाई अवगत नै छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयले मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचको सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण अवस्थामा परिणत गरिदिएको छ । साथै नेपालको राजनीतिक अवस्थामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव बृद्धि भइरहेको छ । यी तथ्यहरुको आधारमा भन्नुपर्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णय त्रुटीपूर्ण र हानिकारक सावित भएको छ ।’
न्युज कारखाना खोटाङ, २० असार हप्ता दिनको अवधिमा खोटाङको त्रिधार्मिकस्थल हलेसीमा ४० हजार भेटी आम्दानी भएको छ । हिन्दु, किरात र बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको हलेसीमा गत ११ असारदेखि १७ असारसम्मको अवधिमा ४० हजार ६५ रुपैयाँ भेटी आम्दानी भएको हो । यस अवधिमा हलेसीमा दर्शनार्थीले एक तोला चाँदी र ०.००५ तोला सुन चढाएको हलेसी सूचना केन्द्रका प्रमुख सयन्द्र राईले जानकारी दिए । संकलन भएको रकम माछापुच्छ्रे बैंकको हलेसी शाखामा खोलिएको हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरिएको छ । हलेसीमा आएका दर्शनार्थी तथा पर्यटकले चढाएको रकमलाई गणना गरेर आम्दानीका रूपमा बाँधेर सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
रारा जान अब छोटो पदमार्ग
खड्क सुनार/न्युज कारखाना मुगु, १९ असार कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थल रारा ताल पुग्न लामाचौरबाट पर्यटकय पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालिका–३ लामाचौर गैराकाँडादेखि रावत महादेव, भेडीखोर, दिघे भालु, ठाकुरनाथ मन्दिर हुँदै रारा तालसम्म जाने नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको हो । हाल लामाचौर र सल्लेरीबाट जाने गरिए पनि यो पदमार्ग निर्माणपछि लामाचौरको छोटो पदमार्गमा प्रायः जिल्लाका पर्यटकीय स्थानहरूमा अवलोकन गर्न सकिने भएको छ । पर्यटकीय पदमार्ग स्थल सञ्चालन भएको स्थान लामाचौरसम्म पुग्न सदरमुकाम गमगढी बजारबाट करिब डेट घण्टा लाग्छ । लामाचौरबाट करिब २० देखि ३० मिनेटको पैदल यात्राले रारा ताल पुग्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बताए । सदरमुकाम गमगढी बजारदेखि रारा तालको काख सल्लेरी र लामाचौरसम्म सवारी साधनमा जान पनि सकिन्छ । तर, पैदल जान चाहने पर्यटकका लागि नयाँ पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको हो । रारा तालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढाउन नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । यो मार्गबाट यहाँका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकेमा रारा ताल र जिल्लाको प्रचार हुने र बर्सेनि हजारौँ पर्यटकले रारा तालको अवलोकन गर्ने उद्योग बाणिज्य संघ मुगुका अध्यक्ष कमल बुढाले बताए । छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको तुम हुँदै लामाचौर जाने दूरी छोटो पर्छ । आकर्षक ठाउँ पनि छ, त्यसैले पर्यटक आकर्षित गर्न सहज हुनेछ । यो पदमार्गलाई थप प्रचार प्रसार गर्न र आवश्यकअनुसारको बजेट विनियोजन गरिने छायाँनाथ रारा नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष नन्दबहादुर रावलले जानकारी दिए । नयाँ पदमार्ग निर्माणपछि लामाचौरका होटेल, पर्यटनको संख्यामा वृद्धि हुने र गाउँको आर्थिक समृद्धिका साथै रोजगारीमा समेत सघाउ पुग्ने नागरिक समाज मुगुका अध्यक्ष रुपबहादुर मल्लले बताए । पर्यटन विकास, स्थानीयको आयआर्जनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो पर्यटन पदमार्गले पनि जोड दिने रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन बद्रि विनोद दाहालले बताए ।
न्युज कारखाना खोटाङ, १४ असार खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मझुवागढीमा बृक्षारोपण गरिएको छ । बृक्षारोपण दिवसको अवसरमा मझुवागढीमा मंगलबार बिहान फूल र सजावटजन्य बहुवर्षे बिरुवा रोपण गरिएको हो । सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघ र प्रगतीशिल युवा सञ्जालको व्यवस्थापनमा डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले देविस्थान सामुदायीक वन क्षेत्रमा धुपी, धुपी सल्ला, रुख कमल, कल्की, कामिनी, जाराकान्डा, असारे फूल, लालुपाते, दाँते ओखर, हलुवाबेद, जाइ, मसला, लालीगुराँस लगायतका बिरुवा रोपिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका उपप्रमुख सुरेश तामाङ, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई, उपमेयर बिसन राई, डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख जगदीश रेग्मी, सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघका प्रदेश सचिव सुर्यबहादुर राई, महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राई लगायतको सहभागीतामा बृक्षारोपण गरिएको हो । मझुवागढीलाई ‘फूलको पहाड’ बनाउने अभियान अन्तरगत सोही स्थानमा बृक्षारोपण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेग्मीले बताए । दिक्तेलको हाटडाँडाबाट करिब ४५ मिनेट पैदल यात्रापछि पुगिने मझुवागढी र कालिका भगवती मन्दीर आसपासका खाली जग्गा तथा सो स्थानमा पुग्ने पैदलमार्ग छेउछाउमा फूल रोपेर ‘फूलको पहाड’ बनाउने महत्वकांक्षी परिकल्पना गरिएको छ । मझुवागढी आसपासको हाटडाँडा, डाँडाखर्क र मेघेचौतारा क्षेत्रलाई समेटेर सोभन्दा माथिल्लो भागलाई आकर्षक गन्तव्य स्थलका रुपमा विकास गर्ने योजना छ । यसका लागि आवश्यक गुरुयोजना तयार पारेर ‘फूलको पहाड’ बनाउने साझा सपना पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चारैतिर हरियाली जंगलले घेरिएको गढीमा घुमफिर गर्ने, पिकनिक जाने, अध्ययन भ्रमण गर्ने, साहित्यीक तथा सांगीतिक कार्यक्रम गर्नेसम्मका स्थानीय पुग्ने गरेका छन् । अग्लो डाँडा भएका कारण टाढा–टाढाका दृश्यावलोकनकालागि समेत स्थानीय मझुवागढी उक्लिने गर्छन् । यसबाहेक मझुवा कालिका भगवतीको दर्शन गर्न र भाकल पूरा गर्न आउनेको भीड दैनिक लाग्ने गरेको छ । गढीमा हरेक वैशाख पूर्णिमाको दिन पूजा गर्दै साकेला नाच्ने प्रचलन छ । भगवती मन्दिरमा कहिलेकहीँ दैनिकजसो बाख्राको पाठी बली दिने गरिन्छ ।
न्युज कारखाना खोटाङ, ७ असार खोटाङको धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल मझुवागढीलाई ‘फूलको पहाड’ बनाउने अभियान थालिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा रहेको गढीलाई बहुवर्षे फूल रोपेर ‘फूलको पहाड’ बनाउने अभियान थालिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तिर्थराज भट्टराई, नेता विष्णुुकुमार राई, डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका निमित्त प्रमुख जगदीश रेग्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रदेश सचिव सूर्यबहादुर राई, महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राई, सुरक्षाकर्मी, देविस्थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतको सहकार्यमा मंगलबार फूलका बिरुवा रोपेर ‘फूलको पहाड’ बनाउने अभियानको सुरुवात गरिएको हो । ‘फूलको पहाड’ बनाउने अभियानको पहिलो दिन जाकाराण्डा, कल्की, रुख कलम, कामिनी, समी, राजवृक्ष, धुपी, धुपी सल्ला, जाइ, कपुर, पुवाले, मसला, असारे फूल, दाँते ओखर, लालीगुराँस लगायतका पाँच सय बिरुवा रोपिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । दिक्तेलको हाटडाँडाबाट करिब ४५ मिनेट पैदल यात्रापछि मझुवागढी पुगिन्छ । मझुवागढी, कालिका भगवती मन्दीर आसपासका खाली जग्गा र सो स्थानमा पुग्ने पैदलमार्ग आसपासमा फूल रोपेर आकर्षक बनाउने महत्वकांक्षी परिकल्पना गरिएको छ । फूलैफूलको डाँडा बनाएर आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि ‘फूलको पहाड’ बनाउने अभियान थालिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राईले बताए । ‘सुन्दर ठाउँ, वनजंगल, प्राकृतिक विविधता र धार्मिक ठाउँमा पर्यटक लोभिएको देखिन्छ । यहाँ तीनवटै चिज एकै ठाउँमा छ । यहाँ मझुवागढी, कालिका भगवती मन्दिर, बुद्धेश्यर महादेव र त्यसको बीचमा सामुदायिक वन छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘फूलको बगैंचा निर्माण गर्न सकियो भने मझुवागढीको पर्यपर्यटन विकासमा सघाउ पुग्नेछ । त्यसको फाइदा नगरपालिकालाई हुनेछ ।’ मझुवागढी आसपासको हाटडाँडा, डाँडाखर्क र मेघेचौतारा क्षेत्रलाई समेटेर सोभन्दा माथिल्लो भागलाई ‘फूलको पहाड’ बनाउने योजना छ । आवश्यक गुरुयोजना तयार पारेर ‘फूलको पहाड’ बनाउने साझा सपना पुरा गरिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रदेश सचिव राईले बताए । ‘मझुवागढीलाई फूलैफूलको डाँडा बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सपना हो फूलको पहाड,’ महासंघका प्रदेश सचिव राईले भने, ‘यसका लागि आवश्यक गुरुयोजना बनाएर बाँकी अघि बढ्छ । हाललाई फूलको बृक्षारोपण अभियान सञ्चालन सुरु गरिएको हो ।’ चारैतिर हरियाली जंगलले घेरिएको गढीमा घुमफिर गर्ने, पिकनिक जाने, अध्ययन भ्रमण गर्ने, साहित्यिक तथा सांगीतिक कार्यक्रम गर्नेसम्मका स्थानीय पुग्ने गरेका छन् । अग्लो डाँडा भएका कारण टाढा–टाढाका दृश्यावलोकनकालागि समेत स्थानीय मझुवागढी उक्लिने गर्छन् । यसबाहेक मझुवा कालिका भगवतीको दर्शन गर्न र भाकल पूरा गर्न आउनेको भीड दैनिक लाग्ने गरेको छ । गढीमा हरेक वैशाख पूर्णिमाको दिन पूजा गर्दै साकेला नाच्ने प्रचलन छ । भगवती मन्दिरमा कहिलेकहीँ दैनिकजसो बाख्राको पाठी बली दिने गरिन्छ ।
नेपाल रेडक्रस कार्यालयमा प्रहरी हस्तक्षेप (फोटो फिचर)
रामेछाप बस दुर्घटना : मृतकको संख्या १२ पुग्यो (तस्बिरसहित)
नेपाल इको प्यानलको कर्पाेरेट कार्यालय भक्तपुरको सल्लाघारीमा
तीन महिनापछि लुम्बिनीका दानपेटिका खोलियो
च्यास्मीटारमा बन्यो महिला कृषि सहकारी संस्थाको भवन
सुदूरपश्चिममा नबिल एसईईप्रमाणपत्र कार्यक्रमको सुरुवात
मध्यरातसम्म उम्मेदवारी मनाेनयन दर्ता, रुपन्देहीमा ४ हजार ७ सय ३२ जनाकाे मनाेनयन
अनलाइन होटल बुकिङ अब ‘होटल संसार’बाट
छेडाबजारमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान
गाउँमै कक्षा १२ सम्म प्राविधिक कृषि पढ्न पाउँदा नरैनापुरका विद्यार्थी फुरुङ्ग
न्युज पोर्टलका लागि पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन : अध्यक्ष हुमागाई
विद्यालय जाँदै गरेकी नाबालिकालाई बलात्कार प्रयास गरेकाे आराेपमा युवक पक्राउ
नब निर्बाचित नगर प्रमुख श्रेष्ठको निर्णयः आफ्नो सेवा सुविधा बिपन्न तथा गरिबीको स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी
जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनको तयारीमा जुट्दै दल
चौदण्डीगढीमा एमालेको निर्विरोध कार्यपालिका गठन
कांग्रेस प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईसहित चार नेताविरुद्ध अन्तर्घातको आरोपमा उजुरी
सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन
सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको निजगढ विमानस्थल बजेटमा समेटियो
लागुपदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण र न्युनिकरण गर्न युवा अभियान
जिसस रसुवा नेतृत्वका लागि कांग्रेस र एमालेको बराबर मतदाता
संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्नु सबैको दायित्व : बागमती प्रदेश प्रमुख शर्मा
बागमती प्रदेशमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस
जहाज सम्पर्कविहीन अपडेटः म्याग्दी कटेर धवलागिरीतर्फ मोडिएको थियो
ट्रिपर दुर्घटना अपडेट : चारै जनाको पहिचान खुल्यो
लमजुङ कारागारका आठ कैदीलाई आममाफी
लुम्बिनी प्रदेशको गणतन्त्र दिवस समारोहमा अधिकांश मन्त्रीहरु अनुपस्थित, प्रमुख अतिथी नै गएनन्
लुम्बिनीमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
कर्णालीको भाग्य फेर्ने रारा अर्थात महेन्द्र ताल
संघीय बजेटले कर्णाली राजमार्ग र जुम्ला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई उपेक्षा गरेकाे आराेप
जनआस्था विनाको न्यायपालिका सफल हुँदैन : प्रधानन्यायाधीश कार्की
माधव नेपाल भन्छन्- प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहन्छ
खेतीपातीको सिजनका बेला कर्णालीमा रासायनिक मल अभाव
बाढीले बगाएको १६ हेक्टर मार्सीधान फल्ने खेतको कुलो निर्माण
जिसस बैतडीमा सत्तारुढ गठबन्धन विजयी
जुवा खालबाट ८६ हजार नगदसहित पाँच जना पक्राउ
ढुंगाडस्थित भत्केको झोलुङ्गे पुल खोलिँदै, अर्को कहिले बन्ने ठेगान छैन
कैलालीका किसानको गुनासो- बर्खा आयो, मल आएन
कुकुरले टोकेको झोंकमा दिल्लीका एक व्यक्तिले मालिकलाई रडले रामधुलाई गरेपछि...
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, २० असार छिमेकीको कुकुरले भुकेर टोक्न थालेपछि पश्चिम दिल्लीका एक व्यक्तिले ककुरसहित तीन जनालाई फलामको रडले आक्रमण गरेका छन् । ती व्यक्तिले कुकुरलाई पनि हिर्काएर गम्भीर घाइते बनाएका छन् । सो घटनाको सम्पूर्ण विवरण नजिकै राखिएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको हो । धरमवीर दहिया सोमबार बिहान टहल्दै गर्दा छिमेकी रक्षितको कुकुरले भुक्न थाल्यो । कुकुरको भुकाइबाट दिक्क बनेका दहियाले कुकुरलाई पुच्छर समाते र धकेलिदिए । आफूले पालेको जनावरलाई उद्धार गर्न मालिक आउँदा दहियाले मालिकलाई पनि हिर्काएका थिए । ककुरलाई रडले हानेर भुईमा पछारेपछि उनले मालिकलाई पनि हिर्काएका थिए । एकपछि अर्कालाई हिर्कापछि अर्का पुरुषले हस्तक्षेप गरेका थिए । कुकुरको विषयलाई लिएर दहियाल र तेस्रो व्यक्तिबीच झगडा भएको थियो । दहियाले परिवारकी एक महिलालाई पनि रडले हानेका थिए । घटनाको भिडियोमा क्रुद्ध ती व्यक्तिले महिलालाई आफ्नो घरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न खोज्दा रडले हिर्काएको देखाइएको छ । यसैबीच, कुकुरले टोकेका दहियाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
न्युज कारखाना काठमाडौं, २१ असार नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी कप्तान रेनुका नगरकोटी कम्तिमा १० हप्ता मैदानबाट बाहिरिने भएकी छिन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले मंगलबार कप्तान रेनुका कम्तिमा १० महिना मैदानबाट बाहिरिने जनाएको हो । १९औं एसियन गेम्सको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टिमकी कप्तान रेनुकाको सोमबार प्रशिक्षणका क्रममा घाँटीमा चोट लागेको थियो । सोमबाररै सातदाबोटोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालमा भर्ना गरिएकी रेनुकाको सोही दिन राति शल्यक्रिया भएको थियो । यसअघि मंगलबार एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, उपाध्यक्षद्वय दावा लामा र दीपक खतिवडासँगै महासचिव किरण राईले रेनुकालाई अस्पतालमै भेटेका थिए ।
न्युज कारखाना लमजुङ ,२१ असार लमजुङमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको प्रथम महिला फुटसलको उपाधि एक्स–गोर्खा कास्कीले जितेको छ । फाइनल खेलमा मिनाङ लाङ्घाली बेसीसहर नगरपालिका २ लाई ३–० गोलले हराउदै एक्स–गोर्खा कास्कीले उपाधि जितेको हो । उपाधिसहित एक्स गोर्खाले ३० हजार पुरस्कार जितेको छ । प्रतियोगितामा उपविजेता मिनाङ लाङघाली बेसीसहरले १५ हजार प्राप्त गरेको छ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट किप्पर एक्स–गोर्खाकी झरना राई, सर्वाधिक गोलकर्ता मिनाङ लाङ्घालीकी सम्झना शर्मा र उत्कृष्ट खेलाडी बाघेताकी मनिषा थापामगर घोषित भएका छन् । उनीहरूले जनही एक हजार पुरस्कार पाएकाे आयोजक लमजुङ फुटसलका संचालक केशबहादुर रानाले बताए । प्रतियोगितामा लमजुङसहित काठमाडौं, कास्की र तनहुँका गरी ८ टिमको सहभागिता रहेको थियो । जिल्लामा पहिलो पटक हाम्रो गोल–महिला हिंसा विरुद्धको बोल भन्ने नाराका साथ प्रथम महिला फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
वडाध्यक्षको पारिश्रमिकबाटै विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त
जनतामा निराशाको लहर छ : झलनाथ खनाल
६४ औं संसद दिवस
प्रधानमन्त्री देउवा सहित गठबन्धनका शिर्ष नेता गरे निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता
!!! Subscribe to view this content !!!
Get the latest creative news from Newskharkhana about everything around the world
Copyright © Newskarkhana